Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football any Belzika Marouane Fellaini tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra iray izay fantatry ny anarany malaza; "Giraffro". Ny tantaranay momba ny tantaram-pitiavan'i Marouane Fellaini momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra ho anao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fotoan'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadihana dia ny tantaram-piainany talohan'ny nahafatesany, ny fiainany manokana, ny fifandraisana amin'ny fiainana, ny fiainam-pianakaviana ary ny zavatra tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny momba azy sy ny fahaiza-manaony, saingy vitsy no mihevitra ny mombamomba an'i Marouane Fellaini izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Marouane Fellaini Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Voalohandohan'ny fiainana
Marouane Fellaini-Bakkioui dia teraka tamin'ny andro 22nd of November 1987 tany Etterbeek, Belzika. Sagittarius no teraka.
Izy dia teraka tamin'ny reniny, Hafida Fellaini ary ray, Abdellatif Fellaini (mpiandry vavahady taloha sy mpamily fiarakaretsaka). Ny ray aman-dreny roa dia ny Moroccan mpifindra monina avy ao amin'ny tanànan'i Tangier. Nifindra tany Bruxelles ry zareo mba hananany ny zanany ary hitady fiainana tsara kokoa.
Fellaini dia nentina tany Brussels niaraka tamin'ny kambana mitovy aminy Mansour Fellaini (aza gaga, kambana izy).
Marouane Fellaini Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Start Career
Ny fitiavana voalohany nataon'i Fellaini dia ny fitadiavana ny hetsika. Nanomboka ny mpihazakazaka 10,000-meter izy. Izany dia niaraka tamin'ny baolina kitra izay nanomboka tamin'ny taona 8 ho an'ny Akademia Anderlecht. Nandeha tany am-pianarana izy tamin'ny mbola kely, raha nandeha bisy na fiara ny mpiara-mianatra taminy.
Na izany aza, ny dadan'i Fellaini, Abdellatif, izay mpilalao baolina matihanina, dia nitarika ny zanany hanaiky ny baolina kitra ary namela lavidavitra lavidavitra. Nankatò ny fanirian'ny rainy izy ary nanaiky ny fanoloran-tena tanteraka ho an'ny baolina kitra.
Tamin'ny vanim-potoana voalohany tao amin'ny Akademie Anderlecht, izy dia nanome ny tanjona 26 ary tamin'ny faharoa dia nanome baiko ny 37 izy. Tao amin'ny akademia tao Anderlecht izy hatramin'ny taona 10 talohan'ny nahatongavany tany Mons, noho ny rainy nahazo asa vaovao tao an-tanàna.
Tamin'ny taona 17, dia nanao sonia ny fifanarahana maharitra nataony tamin'ny Standard Liège izy. Tao no nahafantarany ny fahaizany sy ny faharetany, izay nahatonga azy ho iray amin'ireo mpiantoka baolina kitra tsara indrindra amin'ny Diviziona Voalohany ao Belzika. Ny fahombiazany dia nahatonga azy nandresy ny kiraro Ebony tao 2008, loka iray nomena ny mpilalao tsara indrindra tamin'ny vanim-potoanan'ny Afrikana.
Rehefa nandà ny fandrosoan'ny Manchester United, Real Madrid ary Bayern Munich, Fellaini no nanao sonia an'i Everton tamin'ny Septambra 2008. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Marouane Fellaini Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -His Brand
Ny mpankafy azy dia manao fampirantiana Afro lehibe mba hanehoana ny avonavon'izy ireo ho an'ny olo-mahery, Fellaini.
Ny mari-pamantarana Fellaini dia afindra amin'ny tanana tsara indrindra araka izay hita etsy ambany.
Ny Friseur Marouane Fellaini Afro Wig no tsara indrindra any an-tanàna
Ny fehin-kevitr'i Fellaini dia lasa liana amin'ny fiarahamonin'ny aterineto hatramin'ny nanombohany ny fametrahana azy. Ny sary tahaka ny iray etsy ambany dia nivoaka tamin'ny aterineto.
Marouane Fellaini Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Relationship Life
Lasa sarotra ny fiainam-pitiavan'i Marouane Fellaini. Izy no olona mahafoy ny ainy amin'ny maha-lehilahy tokana azy. Indray mandeha, Lara Binet no olona manan-danja indrindra teo amin'ny fiainana Fellaini.
Fellaini sy Miss Belgium Lara Binet dia navitrika nandritra ny taona maro, mandra-piraisan'izy ireo anjara tamina 2012.
Lara sy Fellaini nipoaka fotoana fohy taorian'ny nanasoniavany ny tompondakan'ny ligin'ny Premier League, ny loharanom-baovao milaza fa nanambady.
Binet dia feno an'i Liège tao 2011. Izy dia finalist ao amin'ny 2011 Miss Belgium hatsaran-tarehy.
Fellaini dia nahatsapa ny fifandraisany tamin'ny fiainany hatramin'ny nifindrany tamin'i Manchester United. Amin'ny teniny ...
'Tany Everton, nitady ahy ireo vehivavy, ' Hoy i Fellaini. 'Be loatra izany. Any Manchester, ny olona dia tsy mahafantatra ahy fa be ary mihazakazaka amin'ny fomba fanajana kokoa.
Vao haingana, niaraka tamin'i Jeffers Roxanne izy. Nahita an'i Fellaini izy tamin'ny alalan'ny namana iray. Jeffers dia ilay sipa am-pitiavana an'i Ashley Cole. Tena ao aminy tokoa izy satria mieritreritra fa tena mahafatifaty ny volony.
Fellaini sy Jeffers Roxanne
Marouane Fellaini Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Marouane Fellaini dia avy amin'ny fianakaviana iray anton-dresaka antonony tarihan'ny dadany, Abdellatif Fellaini. Efa talohan'ny fampiasana ny baolina kitra ny vola.
Abdellatif, dadany, dia nandray anjara tamin'ny ligy Maraokana ho toy ny mpiambina ny klioba Raja Casablanca sy Hassania d'Agadir. Tao 1972 dia naniry ny hiova ho any Eoropa izy ary nanao sonia niaraka tamin'ny klioban'ny klioban'ny tarika voalohany KRC Mechelenz. Na izany aza, ny kliobany Maraokana dia nandà ny hetsika tany Eorôpa.
Raha tokony hiverina any Maraoka, Abdellatif dia namarana ny asany mavitrika, nifindra tany Eorôpa ary lasa mpamily fiara fitaterana ho an'ny fitateram-bahoaka Bruxelles. Ankehitriny dia mirehareha izy noho ny nanomezany ny zanany ho afaka nateraka sy nihalehibe tany Eorôpa. Abdellatif dia manana fifandraisana tsara amin'ny zanany lahy. Naka fisotroan-dronono alohan'ny fotoana izy tamin'ny fiara fitateram-bahoaka mba hanara-maso ny asan'i Marouane.
Fellaini sy ray- Abdellatif
rENY: Hafida Fellaini no renin'i Marouane Fellaini. Ofcourse, fantatsika ny tsy fahamarinan-dry zareo, saingy loharanom-baovao iray no nanambara fa ny reniny Marouane Fellaini no anaran'ilay vehivavy eto ambany. Misaotra ny peratra rehetra.
Ny moana diso i Fellaini, Hafida Fellaini
Ireo rahalahy: Ny anaran'ny zokiny lahy dia Hamza Fellaini. Mpitarika paritra ihany koa izy.
Hamza Fellaini (sary ankavanana)
Mansour sy Marouane misy sary etsy ambany dia kambana mitovy aminy. Samy tia ny volombava ny samy mpiray tam-po aminy.
Marouane Fellaini sy ny rahalahy roa mirahalahy, Mansour.
Hianao, mitovy amin'ny endriny, fa tsy ny halavany. Marouane dia lavitra lavitra noho Mansour.
Marouane Fellaini Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -The Image
Indray mandeha monja, i Marouane Fellaini no mpilalao baolina farany mba hitady ny tenany tsy mety maty amin'ny maha-artista an-dalam-be azy ... tsy misy dikany amin'ny endriky ny tarehiny.
Marouane Fellaini Fomba-Art-tarehy
Nitranga ity tranga ity raha nasongadin'ny Belziana ho an'ny Mpiady Mena nandritra ny fandresena tamin'ny Super Coupe tamin'ny Espaniola reniala Real Madrid.
Nandritra ny fifandonana, dia notifirin'ny baolina i Fellaini rehefa niakatra ho any an-doharano, miaraka amin'ny fahaiza-manaon'ny mpaka sary iray izay midika fa ny fotoana dia afaka ny ho voasambotra mandrakizay. Ny endriky ny tarehin'i Fellaini dia nibitsibitsika, vovonan'ny vavony noho ny fiantraikan'ny baolina, dia tratra tao amin'ny media sosialy.
Vetivety dia niparitaka haingana ny tifitra, miaraka amin'ireo olo-malaza maro sy mpilalao baolina matihanina mpiresaka momba ilay sary. Taorian'ilay lalao dia nampahafantarin'i Fellaini haingana momba ilay sary ary nisafidy ny hizara izany amin'ny alàlan'ny kaonty Instagram manokana azy.
Marouane Fellaini Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Fifandirana fifadian-kanina
Tahaka an'i Mesut Ozil, dia manapa-kevitra i Fellaini na tsia ny Fast. Amin'ny ankabeazany dia tsy mifady hanina izy. Azonao atao ny mikaroka ny aterineto ho an'ny mpilalao baolina Muslim hafa ao amin'ny fitafy mivavaka saingy tsy ao Fellaini na dia taranaka avy amin'ny lovan-tsofina Maraokana manan-tantara aza.
Ny fifadian-kanina mandritra ny Ramadan dia mitaky ny Miozolomana dia tsy misy sakafo sy ranon-javatra avy amin'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany. Mahatsiaro i Fellaini fa mety ho mampidi-doza ho azy izy rehefa milalao ny toetr'andro tahaka ny an'i Brezila ao amin'ny kaontinanta 2014.
Ny tsy firaharahan'ny fiarahamonina Miozolomana, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka sy Valon Behrami any Soisa Mesut Ozil ny Alemana indray androany dia nanambara ny fanapahan-kevitr'izy ireo hialana amin'ny fifadian-kanina noho ny fahasalamany sy ny kalitaon'ny toerany.
Ho fiarovan-tena dia ny filoha lefitry ny Federasiona Fikambanana Silamo any Brezila, Ali Zogbhi nanao hoe::
Ny siansa dia efa nanaporofo fa raha manao fanatanjahan-tena ianao nefa tsy mihinana dia mahatsapa olana lehibe. Noho izany dia azo raisina kokoa ny mamela ny mpilalao tsy mifady hanina mandritra ity fotoana ity. "
Marouane Fellaini Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Zodiac Trait
Marouane Fellaini dia Sagittarius ary manana ireto toetra manaraka ireto amin'ny toetrany;
Ny Tanjon'i Marouane Fellaini: Fitiavana, idealista, fahatsapana vazivazy
Ny Fahalemen'i Marouane Fellaini: Ny fampanantenana izay mihoatra noho izay afaka, dia tsy manam-paharetana, dia hilaza zavatra na inona na inona tsy mitovy
Inona no tian'i Marouane Fellaini: Fahalalahana, fitsangatsanganana, filozofia, eny ivelany
Inona no tsy tia an'i Marouane Fellaini: Ny vahoaka clingy, izay voafintina, ny teoria miandalana, ny antsipiriany.
Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'Atoa Marouane Fellaini momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!
Axel Witsel tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Toby Alderweireld tantaram-pitiavana bebe kokoa fantatry ny olona momba ny tantaram-piainany